ikhaya » iindaba » I-Box Box Systems 'ezintsha zeParDD Panels zeNkulumbuso kunye neMiphumo emva kweMigca ye-Adobe Creative Cloud Workflows
I-Box Box Systems 'ezintsha zeParDD Panels zeNkulumbuso kunye neMiphumo emva kweMigca ye-Adobe Creative Cloud Workflows
WARWICK, UK - Sept. 12, 2017 - I-Square Box Systems, inkampani emva kwenkqubo yolawulo lwe-CatDV ye-asset management (MAM), namhlanje ivule inguqu ephakamileyo ye-Adobe Premiere Panel kunye ne-Adobe entsha emva kwePaneli ye-Effects. Zombini iipaneli zenzelwe ukuphucula inkqubo yokudala ye-Adobe Creative Cloud abasebenzisi abafuna ukufikelela kunye nokusebenza kunye nezinto ezilawulwa kwiCatDV.
I-Panel ye-Square Box Systems ye-Adobe Premiere Panel yenze ukuba nayiphi na umsebenzisi we-CatDV ungene kwaye uphendule i-database yeCatDV, uphinde uphendule amaqela okuvelisa kunye neekhathalogu, ukusuka kwi-Adobe Premiere. Iinguqulelo ezitsha eziPhambili kunye neZemva kweempembelelo ziquka ukuhamba kweefowuni, ukujonga kwangaphambili, kunye nokusebenza okusebenzayo okwenza imithombo yeendaba, umdlali kunye nemethadatha yonke kwipaneli enye. Ezinye izixhobo ezitsha zibandakanya umdlali ochanekileyo wesigxina, ukukwazi ukuhlaziya imethadatha (umzekelo, ukukhaba ukubuyisela kwi-archive), kunye nokukwazi ukusingatha iinkalo ezininzi zemethadatha xa uthumela umxholo kwi-Premiere okanye emva kweempembelelo.
"Ngala maphaneli amatsha, abathengi banokuzisa ii-CatDV kwiimpahla zabo ze-Adobe kwaye bahlawulele uluhlu olubanzi lwemisebenzi yolawulo lwee-asethi. Banokufumana nokuphinda basebenzise ukhetho olubanzi lwemidiya - ukucima, amafilimu, ukuhlala, kunye nemiphumo-ngokukhawuleza, ngaphandle kokushiya izixhobo zokudala abajwayele ukuba nazo, "kutsho uDave Clack, CEO, Square Box Systems. "Ngezakhono ezinjengokuphicotha ngokukhawuleza kunye nokujonga kuqala komxholo, umdlali weendaba ochanekileyo, kunye nekhono lokuqalisa ukwenza izinto ezinjengokubuyisela kwi-archive, iipaneli ezintsha zigcina ixesha, ukunciphisa iindleko, nokukhuthaza intsebenziswano kunye noqhagamshelwano."
I-Square Box Systems iya kugxininisa i-Panel entsha ye-Adobe Premiere kunye ne-Adobe Emva kwePhaneli kwi-stand 7.J38 kwi-IBC2017. Olunye ulwazi malunga neCarlot Box Systems kunye neCatDV lufumaneka Www.squarebox.com.
Mayelana neCandelo leBhokisi leBhokisi
I-Square Box Systems yinkampani yesofthiwe yecala elizimeleyo elijongene nokuphathwa kwempahla yeefayili kunye nemveliso yokusebenza kwemveliso. Isicelo seCastDV esibangela ishishini, eqaliswe kwi-2001, senza umyalelo kwi-chaos yolawulo lwefayile yeendaba ngokuwenza kube lula ukuba abanikazi bokuqukethwe bahlaziye kwaye benze imali ngeempahla zabo. Ukunikezela ngethuluzi lokusebenza elinamandla, elisebenzisekayo kunye nokuhlanganiswa okuhlanjululwe ngobuninzi bezentengiso zabathengisi bemisebenzi, i-software ye-CatDV isebenza kuma-Mac (R) kunye ne-Windows (R) kwaye iyakunikwa kwiinkampani ezincinci ukuya kwiinkampu zoshishino ezininzi ezilawula izigidi ze-asethi. Kwi-2012, i-Square Box Systems yanikezelwa i-Queen's Award ye-Innovation, eyenziwe ngu-Queen Elizabeth II. I-CatDV iye yahlonishwa kunye nenani lamabhaso, kubandakanya i-Creative Cow Blue Ribbon yeThuluzi eliLawulayo leMpahla elungileyo kunye ne-Videography Magazine Best of NAB Vidy Award. Ngokusekelwe e-UK, i-Square Box Systems ithengisa i-CatDV emhlabeni jikelele ngenethwekhi yabasasazo nabathengisi ababonelela ngeenkonzo zokuveliswa kwemisebenzi, ukufakwa kwendawo, ukubonisana kunye nenkxaso. Olunye ulwazi lufumaneka kwi Www.squarebox.com.
Ukutyelela iComputer Box Systems kwi-IBC2017, Yima 7.J38
Qhagamshelana neWiki Doc: Www.wallstcom.com/SquareBox/170912SquareBox.docx
Ifowuni yamagama: Iibhokisi zeeNdawo zeBhokisi zeNkundla zeNgcaciso zeNkcazo zeNkcazo kunye neMiphumo elandelayo emva kweMigca ye-Adobe Creative Cloud Workflows
Ifowuni yamagama: Iibhokisi zeeNdawo zeBhokisi zeNdawo zeNkcazo zeNkcazo zeNkcazo zePalamente kunye neZiphumo ezilandelayo emva kokuSondeza i-Adobe Creative Cloud Workflows - I-View View
Yabelana nge Twitter: twitter.com/intent/tweet?text=Square%20Box%20Systems%27%20New%20@CatDV_MAM%20Panels%20for%20Premiere%20and%20After%20Effects%20Streamline%20Adobe%20Creative%20Cloud%20Workflows%20-%20https://goo.gl/W85asY
Adobe Creative Cloud Emva kwemiphumo CatDV Panels IBC2017 ukudityaniswa Lawulo lweefa Iilori zangaphandle ezisasazwayo Iebhokisi zeBhokisi Inkundla ye-Ultra HD	2017-09-12
next: Amaqabane angama-60 kunye ne-Streaming Unified ukunikela amava okuboniswayo, afumanekile okubukela kuwo onke amafomathi okusasazwa kwevidiyo
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "I-Square Box Systems 'entsha yePatDV Panels ye-Premiere kunye neMiphumo ye-Effects Streamline i-Adobe Creative Cloud Workflows". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/square-box-systems-new-catdv-panels-for-premiere-and-after-effects-streamline-adobe-creative-cloud-workflows/. Enkosi.